ဖရစ်ဒရစ် အန်းဂဲ (၁၈၇၇)
၂၈ နိုဝင်ဘာ ၁၈၂၀
၅ ဩဂုတ်၊ ၁၈၉၅(1895-08-05) (အသက် ၇၄)
၁၉ ရာစု ဒဿနိကဗေဒ
နိုင်ငံရေး ဒဿနိကဗေဒ၊ စီးပွားရေး
ဖရစ်ဒရစ် အန်းဂဲ (အင်္ဂလိပ်: Friedrich Engels; /, /; ဂျာမန်: [ˈfʁiːdʁɪç ˈɛŋəls]; ၂၈ နိုဝင်ဘာ ၁၈၂၀ – ၅ ဩဂုတ် ၁၈၉၅) သည် ဂျာမန်လူမျိုး ဒဿနပညာရှင်၊ လူမှုရေးသိပ္ပံပညာရှင်၊ ဂျာနယ်လစ်နှင့် စီးပွားရေးသမား တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဂျာမန် လူမျိုး ဘောဂဗေဒပညာရှင်နှင့် ဆိုရှယ်လစ်ဝါဒပါရဂူကြီး ဖရစ်ဒရစ် အန်းဂဲသည် ခေတ်သစ်ဆိုရှယ်လစ်နှင့် ကွန်မြူနစ်ဝါဒတို့ကို လေးနက်စွာ တွေးတောကြံဆ လမ်းစဉ်ချပေးခဲ့သော ပုဂ္ဂိုလ်ကြီး တစ်ဦးဖြစ်သည်။ လူတို့၏ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး အဖွဲ့ အစည်းကို ပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးသူ ခေါင်းဆောင်ကြီးတစ်ဦး လည်းဖြစ်သည်။ အတွေးအခေါ်ချင်းတူမျှသော ကားလ်မာ့ခ်နှင့် ရာသက်ပန် မိတ်ဆွေကြီးဖြစ်၍ ကားလ်မာ့ခ်နှင့်အတူပူးပေါင်း၍ ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို တီထွင်ခဲ့သူလည်းဖြစ်သည်။
အန်းဂဲသည် ပရပ်ရှားပြည် ရိုင်းလန်းဒေသရှိ ဗာမင်မြို့ ၌ ၁၈၂ဝ ပြည့်နှစ် စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက်နေ့တွင် ဖွားမြင်သည်။ မိဘများသည် စီးပွားရေး၌ ကုံလုံသောအထည်စက်ရုံ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သည်။ ဖခင်ဖြစ်သူက သားအားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို သူနှင့်အတူ ဒိုးတူပေါင်ဖက်လုပ်ကိုင်နိုင်စေရန် ၁၇ နှစ်သား အရွယ်ကပင် မိမိ၏လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စေသည်။ သို့ရာတွင် အန်းဂဲသည် စာပေ၌သာ ဝါသနာထုံရကား ဖခင်၏ လုပ်ငန်းတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်စဉ်နှင့် ဘာလင်မြို့တွင် စစ် သင်တန်း တစ်နှစ်တက်ရောက်စဉ်အတွင်း အားလပ်ချိန်များ၌ ဒဿနိကဗေဒဆိုင်ရာ စာပေများကိုလေ့လာသည်။ အသက် ၂၁ နှစ်အရွယ်တွင် ကွန်မြူနစ်ဝါဒကို သက်ဝင်ယုံကြည်လာကာ မန်ချက်စတာမြို့၌ ဖခင်၏ရုံးခွဲတွင် ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆောင်ရွက်နေစဉ် အင်္ဂလန်ပြည်၏ ချားတစ်ဟု နာမည်ကျော် သော နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် စီးပွားကုန်သွယ်ရေးသမဂ္ဂတို့ ၏ လုပ်ငန်းများတွင် ဆက်သွယ်ပါဝင်ခဲ့လေသည်။ ၁၈၄၅ ခု နှစ်တွင် အန်းဂဲသည် အရင်းရှင်လူတန်းစားအား ဝေဖန်ထား သည့် "အင်္ဂလန်ပြည်မှ အလုပ်သမား လူတန်းစား၏အခြေ အနေ" ခေါ် စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ရေးသားထုတ်ဝေသည်။
၁၈၄၄ ခုနှစ်တွင် ပရပ်ရှားပြည်နယ်သို့ ပြန်ရောက် သောအခါ ပါရစ်မြို့၌တွေ့ဆုံသိကျွမ်းခဲ့ရသော ကားလမတ်နှင့် ပြန်လည်ဆက်သွယ်နိုင်ရန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းမှထွက်ကာ ဖခင် ထံမှ ထောက်ပံ့ကြေး အနည်းငယ်ဖြင့် နေထိုင်လေသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ အန်းဂဲသည် ကားလမတ်နှင့် ပူးပေါင်းကာ ကွန်မြူနစ်ဝါဒ သဘောတရားခေါ် စီးပွားရေးသဘောတရားကို တီထွင်ပြုစုကာ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းတွင် ပျံ့နှံ့အောင် လုပ်ခဲ့သည်။ အန်းဂဲသည် ကားလမတ်နှင့်ပေါင်း၍ "မြတ်သောအိမ်ထောင်စု"ဟူသည့် ကျမ်းတစ်စောင်ကို ပြုစုခဲ့သည်။
ပရပ်ရှားအစိုးရ၏ ပန်ကြားချက်အရ ကားလမတ်သည် ပြင်သစ်နိုင်ငံမှ နှင်ထုတ်ခံရ၍ ဘယ်ဂျီယမ်နိုင်ငံ ဗရပ်ဆဲမြို့တွင် ခိုလှုံနေထိုင်စဉ် အန်းဂဲလည်းသွားရောက်၍ ကားလမတ်နှင့်အတူ ဂျာမန်ဘာသာဖြင့် ရက်သတ္တပတ်စာစောင်ဖြစ်သော "ဗရပ်ဆဲ လာ ဒွိုက်ရှီဇိုက်တွန်" သတင်းစဉ်ကို ခေတ္တထုတ်ဝေသေးသည်။ ထို့နောက် မြေအောက်တော်လှန်ရေး လူစုကိုစုစည်းကာ "တရားသူတို့အဖွဲ့ချုပ်"ဟု အမည်တွင်သော နိုင်ငံပေါင်းစုံ လျှို့ဝှက်အသင်းသို့ဝင်သည်။ ယင်းသည်ကား မျက်မှောက်ကာလ ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့ချုပ်၏ ကနဦးအသွင်ပင်ဖြစ်သည်။ ဤအဖွဲ့ချုပ် အတွက် အန်းဂဲသည် ကားလမတ်နှင့်အတူ နာမည်ကျော် "ကွန်မြူနစ်ကျေညာစာတမ်း" ခေါ် ကွန်မြူနစ်အဖွဲ့ချုပ်၏ ဝါဒ သဘောရေးရာထုတ်ပြန်ချက်ကို ရေးသား၍ ၁၈၄၈ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ထုတ်ဝေဖြန့်ချိခဲ့လေသည်။ ထိုနှစ်တွင်ပင် ဂျာမနီနိုင်ငံဗေဒင်မြို့တွင် တော်လှန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာသော အခါ အန်းဂဲလည်းဝင်ရောက်ပါဝင်ခဲ့သည်။ သို့ရာတွင် ဂျာမန် အစိုးရက တော်လှန်ရေးကြီးကို အောင်မြင်စွာ နှိမ်နင်းလိုက် သောအခါ အန်းဂဲလည်း အင်္ဂလန်ပြည်သို့ သွားရောက်ခိုလှုံနေ လေသည်။
၁၈၅ဝ ပြည့်နှစ်မှစ၍ အန်းဂဲသည် ဖခင်လုပ်ငန်းတွင် စာရေးအဖြစ်ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်၍ ရရှိသမျှ လစာကလေးကိုခွဲ၍ လန်ဒန်မြို့၌နေထိုင်လျက်ရှိသူ မိတ်ဆွေကြီး ကာလမတ်အား ထောက်ပံ့လေသည်။ ၁၈၅ဝ ပြည့်နှစ်မှ ၁၈၇ဝ ပြည့်နှစ်အထိ အနှစ် ၂ဝ လုံးလုံး ကားလမတ်နှင့် အန်းဂဲတို့သည် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး မတွေ့ဆုံကြရသော်လည်း စာချင်းမူ နေ့စဉ်အဆက် အသွယ်ရှိခဲ့လေသည်။ ၁၈၆ဝ ပြည့်နှစ်တွင် ဖခင်ကြီးကွယ် လွန်သောအခါ အန်းဂဲသည် ဖခင်၏လုပ်ငန်းတွင် အစုဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာသည်။ ၁၈၆၄ ခုနှစ်တွင် အန်းဂဲသည် အိုင်းရစ် အမျိုးသမီး အယ်လစ်ဇဗက်ဗန်းနှင့် အိမ်ထောင်ကျသည်။ ၁၈၆၉ ခုနှစ်တွင် လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ အစုရှယ်ယာများကို ရောင်းချ၍ ၁၈၇ဝ ပြည့်နှစ်တွင် အင်္ဂလန်ပြည်၌ လုံးလုံးလျားလျား သွားရောက်နေထိုင်ကာ စာပေဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများဖြင့်သာ အချိန်ကိုကုန်လွန်စေသည်။ လန်ဒန်မြို့သို့ ရောက်သည့်အချိန်မှ စ၍ ကားလမတ်ကွယ်လွန်သည့် ၁၈၈၃ ခုနှစ်အထိ ကားလမတ်နှင့် အန်းဂဲတို့နှစ်ဦးသည် မခွဲတော့ဘဲ စာပေများကိုစုပေါင်း ပြုစုကြသည်။ ယင်းကာလအတွင်း အန်းဂဲသည် အပြည် ပြည်ဆိုင်ရာ ပထမအထွေထွေအဖွဲ့ချုပ်ကြီးတွင် စပိန်၊ ပေါ်တူဂီ၊ အီတလီနိုင်ငံများအတွင် အတွင်းရေးမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်သည်။ ကားလမတ် ကွယ်လွန်သည့်အချိန်မှစ၍ သူကွယ်လွန် သည်အထိ ၁၂ နှစ်လုံးလုံးအန်းဂဲသည် နှစ်ဦးပူးပေါင်းပြုစုခဲ့ သော စာပေလုပ်ငန်းများကို တစ်ဦးတည်းဒိုင်ခံလုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။ ကားလမတ်ပြုစု၍ မပြီးဘဲ ကျန်ခဲ့သော စာမူများအနက် အမြောက်အများကို အန်းဂဲသည် ဆက်လက်ပြုစုခြင်း၊ တည်းဖြတ်ခြင်း၊ ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်းများ ပြုခဲ့သည်။ ယင်းတို့အနက် အထင်ရှားဆုံးမှာ ၁၈၈၅ ခုနှစ်နှင့် ၁၈၉၅ ခုနှစ်များတွင် အသီးသီးထုတ်သော "အရင်းအနှီးကျမ်း" အတွဲ ၂ နှင့် ၃ ဖြစ်သည်။ အန်းဂဲတစ်ဦးတည်း ပြုစုရေးသားသော စာအုပ်များမှာ "အိမ်ထောင်စု၏မူလဘူတ"၊ "ပုဂ္ဂိလကပိုင်ပစ္စည်း"၊ "ဂျာမနီ နိုင်ငံမှတောင်သူလယ်သမားတိုက်ပွဲ (၁၈၅ဝ)၊ "ဂျာမနီနိုင်ငံ တော်လှန်ရေးနှင့် တန်ပြန်တော်လှန်ရေး (၁၈၅၁)"၊ "နိုင်ငံ (၁၈၈၄)"၊ "ဆိုရှယ်လစ်လောကနိဗ္ဗာန်နှင့် သိပ္ပံရေးရာ" (၁၈၉၁) တို့ဖြစ်သည်။
အန်းဂဲသည် ၁၈၉၅ ခုနှစ် ဩဂုတ်လ ၅ ရက်နေ့တွင် လန်ဒန်မြို့၌ ကွယ်လွန်သည်။ ကွန်မြူနစ်ဝါဒသည် ၂ဝ ရာစုနှစ်အစမှစ၍ ဥရောပတစ်ခွင်၌ အတော်ပျံ့နှံ့ခဲ့သည်။ အန်းဂဲနှင့် ကားလမတ်တို့ ချမှတ်ခဲ့သော ထိုလမ်းစဉ်ကို ရုရှတော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်များ ဖြစ်သော လီနင်နှင့် စတာလင်တို့က လက်ခံကြရုံမက ရုရှ တော်လှန်ရေးပြီးဆုံးသောအခါ ရုရှနိုင်ငံသည် ထိုဝါဒကို လိုက် နာကျင့်သုံးလျက်ရှိလေသည်။
↑ Norman Levine, Divergent Paths: The Hegelian Foundations of Marx's Method, Lexington Books, 2006, p. 92: "the Young never graduated from the gymnasium, never went to university..."
↑ "Engels". Random House Webster's Unabridged Dictionary.
↑ ၃.၀ ၃.၁ Merriam-Webster, "Engels".
↑ Hunt, Tristram (2009), Marx's General: The Revolutionary Life of Friedrich Engels, Metropolitan/Henry Holt & Co.